Mpae Bi Wɔ Hɔ a Onyankopɔn Ntie​—Adɛn Ntia? | Bible Nsɛmmisa
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bambara Bislama Bissau Guinean Creole Bulgarian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hmong (White) Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kekchi Kikamba Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Moore Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Norwegian Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Romanian Russian Russian Sign Language Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sunda Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tiv Tsonga Tswana Turkish Turkmen Twi Ukrainian Umbundu Vietnamese Wayuunaiki Wolaita Wolof Xhosa Yoruba Zulu
Mpae Bi Wɔ Hɔ a Onyankopɔn Ntie​—Adɛn Ntia?
Audio Baabi a wubetumi atwe nneɛma abɔ atie Mpae Bi Wɔ Hɔ a Onyankopɔn Ntie​—Adɛn Ntia?
Mpae bi wɔ hɔ a, Onyankopɔn ntie. Nneɛma mmienu a edidi so yi nti, sɛ obi bɔ mpae a, Onyankopɔn rentie:
1. Mpae no ne Onyankopɔn apɛde nhyia
Sɛ obi bɔ mpae, na sɛ ne mpaebɔ no ne Onyankopɔn apɛde anaa n’akwankyerɛ a ɛwɔ Bible mu no nhyia a, Onyankopɔn rentie. (1 Yohane 5:14) Sɛ nhwɛso no Bible ka sɛ yɛnkwati adifudepɛ. Kyakyatow piapia nkurɔfo ma wɔbɛyɛ adifudepɛfo. (1 Korintofo 6:​9, 10) Enti sɛ wobɔ mpae sɛ Onyankopɔn mma wunni loto a, ɔrentie. Onyankopɔn nyɛ obi a wubetumi asomasoma no kɛkɛ ma wayɛ nea wopɛ ama wo. Ɛno ma yɛn koma tɔ yɛn yam, efisɛ sɛ Onyankopɔn yɛ nea obiara pɛ ma no a, anka nea ebinom bɛka sɛ Onyankopɔn nyɛ no bɛyɛ hu.​—Yakobo 4:3.
2. Nea ɔrebɔ mpae no aso yɛ den
Wɔn a wɔde asi wɔn ani so sɛ wɔbɛyɛ Onyankopɔn so asoɔden no, ontie wɔn mpaebɔ. Ɛho nhwɛso baako ni: Bere bi, ná ebinom ka sɛ wɔsom Onyankopɔn, nanso wɔkɔɔ so ara yɛɛ asoɔden. Enti Onyankopɔn ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Sɛ motrɛw mo nsam a, miyi m’ani hintaw mo. Mo mpae dodow no nyinaa mintie, efisɛ mogya ayɛ mo nsa mãmã.” (Yesaia 1:15) Sɛ wɔsesaa wɔn akwan ‘totoo nneɛma yiye’ ma wɔne Onyankopɔn ntam yɛɛ papa a, anka obetie wɔn mpaebɔ.​—Yesaia 1:18.
Adɛn Nti Na Onyankopɔn Ntie Mpaebɔ Ahorow Bi?
Bible ma yehu mpaebɔ a Onyankopɔn tie ne nea ontie.
Dɛn Nti Na Onyankopɔn Ntie Ebinom Mpaebɔ?
Share Share Mpae Bi Wɔ Hɔ a Onyankopɔn Ntie​—Adɛn Ntia?
ijwbq asɛm 30